Ogeysiiska Qandaraaska Ugaarsiga Buca Metro Oo Loogu Baaqay Caalamka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirOgeysiiska Qandaraaska Ugaarsiga Buca Masaarida Oo Caalamka Looga dhawaaqay
16 / 01 / 2020 35 Izmir, tareenka, Turkish Aegean, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Metro, TURKEY
ogeysiiska qandaraaska dhulka hoostiisa eeca buca ayaa lagu dhawaaqay adduunka
Ogeysiiska guud ee mashruuca Üçyol - Buca Metro, oo loo yaqaan maalgashiga ugu weyn ee taariikhda mzmir, ayaa lagu daabacay websaydhka Baanka Yurub ee Dib-u-dhiska iyo Horumarinta. Qandaraaska caalamiga ah, qandaraasyada ayaa la codsadaa dhismahana waxaa loo qorsheeyay inuu bilowdo qeybtii labaad ee sanadkan.
Üçyol - Mashruuca Buca Metro ayaa shalay lagu shaaciyey websaydhka Baanka Yurub ee Dib-u-dhiska iyo Horumarinta (EBRD). Ogeysiiska guud wuxuu u oggolaanayaa dhammaan shirkadaha adduunka in ay ka warqabaan mashruuca una diyaar garoobaan qandaraaska.
Habka soo socda, hindiso gaar ah ayaa la qaban doonaa lix bilood gudahood si loo helo qandaraasyada shirkada guuleysataana waa la go'aamin doonaa. Dhismaha ayaa loo qorsheeyay inuu bilaabmo badhkii labaad ee sanadkan. EBRD ayaa la saxeexday heshiis oggolaansho maalgalin ah oo ah 80 milyan oo euro oo ay la siisay dowladda hoose ee Magaalada Izmir bishii Diseembar ee la soo dhaafay.
Maalgashiga ugu weyn ee taariikhda Izmir
Üçyol - Buca Metro ayaa noqon doonta mashruuca ugu weyn ee maalgashiga taariikhda İzmir. Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir ayaa fulin doonta mashruuca iyada oo adeegsata lacagteeda. Dhererka xariiqda, oo lagu furi doono farsamo qoto dheer oo tunnel ah, ayaa gaari doonta 13,5 kilomitir. Laga bilaabo Üçyol oo ka kooban 11 saldhig, Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Dawladda Hoose ee Buca, Butcher, Hasanağa Garden, Dokuz Eylül University, Buca Koop iyo Çamlıkule saldhig ayaa la qaban doonaa.
Qadka metrooga ee u dhexeeya Buca Metro, F. Altay-Bornova iyo Üçyol Station; Khadadka İZBAN ayaa ku kulmi doona xarunta Şirinyer Station. Mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee mashruucan waa marinka dhulka hoostiisa mara oo aan lahayn darawal ..
Seminaar iyo dhismaha dayactirka ayaa sidoo kale la dhisi doonaa
Baaxadda mashruucan dhexdeeda, aqoon-isweydaarsi dayactir iyo dhisme bakhaar oo leh meel xiran 80 mitir murabac ayaa sidoo kale laga dhisi doonaa. Dhismaha labada dabaq ah, dabaqa hoose waxaa loo isticmaali doonaa joogitaan habeen ah iyo dabaqa sare sidii dayactirka baabuurta iyo dabaqa dayactirka. Dusha sare waxaa sidoo kale jiri doona xafiisyo maamul iyo aag shaqaale.
Fadlan halkaan riix si aad u aragto qoraalka Riix halkan.
Khariidadda Buca Metro
Khariidadda Izmir Buca Metro
3. Hawlgalkii Gaadiidka ee Garoonka Diyaaradaha La Ogaaday ee Caalamka la Gaaray
Ogeysiinta Ugaarsiga: ANKARA - KONYA YHT SIGNALIZATION MAALINTA XANNAANADA July 13, 2012 Olarak
Qandaraaska Koowaad waxaa loo sameeyay Buca Metro
Mashruuca Buca Metro ayaa la dhameeyey ... Asal ahaan waxaa lagu dhigi doonaa 2018
Buca Metro waxay ku socotaa waddada
Kocaoğlu: "Lacag waa diyaar, waxaan sugeynay saxiixa Buca Metro"
Ankara oo la filayo in la ansixiyo Mashruuca Buca
Buca Metro Station
Buca Subway Ayaa Noqon Dooni
Ogeysiinta Ugaarsiga: Üçyol Ist - DEÜ Tınaztepe Campus - Buca Koop İzmir HRS…
Karşıyaka iyo Mashaariicda Khadka Buca Tram oo ay ansixineyso Wasaaradda Horumarinta
Mashruuca Metro Ukiol Buca
Ogeysiinta Qandaraaska Qandaraaska Buca Subway
Qandaraaska Buca Metro
Wadada Buca Metro
Saldhigyada Buca Metro